Maraykanka oo dacwado kusoo oogaya aas aasaha barta internet-ka WikiLeaks ee Julian Assange - BBC News Somali
Maraykanka oo dacwado kusoo oogaya aas aasaha barta internet-ka WikiLeaks ee Julian Assange
Image caption Julian Assange.
Wararka ka imaanaya dalka Maraykanka ayaa sheegaya in Waaxda Cadaaladda ee dalkaas ay diyaarinayso dacwado kadhan ah aas aasaha barta internet-ka ee WikiLeaks, Julian Assange.
Maraykanka oo aqoonsaday dadkii Ruushka ahaa ee xogta ka xaday
Hay'adaha sirdoonka Maraykanka ayaa sheegaya in Ruushku uu uga gollahaa faragalinta doorashada in Donald Trump uu ka caawiyo sidii uu ugu guulaysan lahaa doorashadii 2016-kii. Ruushka ayaase beeniyey dhammaan eedaymahaas.
Mid kamid ah qareenada Mr Assange ayaa u sheegay wargayska the Guardian in qof lagu dacweeyo xog sax ah oo uu daabacay ay tahay" waddo halis ah oo kadhan ah dimuquraadiyadda"
" Warka sheegaya in dacwado fal dambiyeed laga gudbiyey Mr Assange waa mid walaac leh oo hawtul hamag ah" ayuu yiri Barry Pollack
Madaxweynaha Ecuador Lenin Moreno ayaa sheegay in aanu u "garaabayn" hawlaha uu wado Mr Assange wuxuuna ku tilmaamay in uu yahay "dhagax kabahooda galay"